China bag iphepha nokwenziwa kunye Factory | JAHOO
Ukucaciswa kweMveliso Into eThenga ngexabiso eliphantsi elenziwe ngokutsha yoLuntu oluPrintiweyo yokutya okuThengiweyo kweCrafti yeBlack Kraft Iphepha Ngeemphatho zephepha lokutya Ubungakanani 5.25x3x8.5 intshi, 8 × 4.75 × 10 intshi, 10x5x13 intshi, 16x6x12 intshi, okanye ngentando yakho. iphepha lokutya ibhegi Ukutyeba 80gsm, 90gsm, 100gsm ...
Umba Ixabiso eliphantsi elenziwa ngokutsha lesiko elenzelwe into yokuPrinta iGrocery yokuPakisha iCrafti yeCrafti yePhepha lePhepha eliPhethe iibhegi zokutya
Ubungakanani 5.25x3x8.5 intshi, 8 × 4.75 × 10 intshi, 10x5x13 intshi, 16x6x12 intshi, okanye ngentando yakho. iphepha lephepha lokutya
Ukutyeba 80gsm, 90gsm, 100gsm, 110gsm, 120gsm okanye ibhegi iphepha Elungiselelweyo
Uhlobo lweinki Eco-friendly Amanzi-based Soy Ink iphepha lephepha
Izinto eziphathekayo Iphepha leBrown Craft / Iphepha lokuYila, iPhepha eliMhlophe / iphepha leKraft, okanye iPhepha lesiqhelo
Uphawu I-FSC eQinisekisiweyo eyi-100% enokuphinda isebenze kwakhona, Ukwenza umatshini oZenzekelayo, i-Eco-friendly, iyahlala, kunye nokuPrinta okuhle kweNice.
Uhlobo lokuphatha Izibambo ezijijekileyo, Izibambo ezi-Flat, iRibhoni, intambo ye-PP, umqhaphu, i-Nylon, i-Die-cut okanye i-Handle ngentando
Umphezulu Gqiba Ukucoca iVarnishing, Glossy / Matt Lamination, igolide / isilivere eshushu yokunyathela, ukuloba, ukutyabeka i-UV, Ukunyathela ngefoyile, isiphumo sehologram, njl.
Ukusetyenziswa Ukuthenga, Isipho, Umtshato, Ukutya, ukuThengisa ngeNtengiso, Ipati, Izambatho, uKwazisa, Indawo yokutyela, njl.
Izatifikethi FSC, SGS, BSCI, ISO9001: 2008, njl
Ixabiso eliphantsi elenziwa ngokutsha lesiko elenzelwe ukuthengwa kweGrosari yokuPakisha iCrafti yeCrafti yePhepha lePhepha eliPhetheyo
Umbuzo: Ndingakuthemba njani?
A: Singumzi-mveliso wokuprinta oseWenzhou, kwiPhondo laseZhejiang. Sineentlobo ezininzi zoomatshini bokuqinisekisa umgangatho wemveliso yethu kubo bonke abathengi bethu. Nceda ukhululeke uzive usityelele!
A: Nceda usithumelele uphando kunye nezinto eziphathekayo, ubungakanani, ubugcisa kunye nobungakanani. Ngaphandle koko, ungasithumela imifanekiso kunye nemibono, siya kukunika iingcebiso zethu zobuchule kwisicelo sakho.
Q: Uya kuthunyelwa nini umyalelo wam?
A: Ngokwesiqhelo ixesha lokuvelisa ziintsuku ezili-15-20 zeKhalenda. Ukuba iodolo yakho ingxamisekile, sinokuyilungiselela njengeyona nto iphambili. Nceda unxibelelane nentengiso yethu malunga nexesha elithe ngqo.
Q: Ndingafumana isampulu ngaphambi kokufaka iodolo?
A: Singabonelela ngeemveliso ezifanayo zasimahla esizivelisileyo zokujonga umgangatho, ngelixa uhlawula nje iindleko zokuhambisa. Ukuba ufuna ukwenza ngokwesiko isampulu yomzimba ngokweemfuno zakho kuya kubakho iintlawulo ezichaphazelekayo. Nangona kunjalo, oku kungabuyiselwa kwimveliso yobuninzi.
Umbuzo: Ndingahlawula njani?
A: Samkela iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula, ezinje nge-T / T, isiqinisekiso sorhwebo, i-paypal…
Eyona ndlela ilungileyo kukuqinisekisa ukuthengisa, ukuthengisa kwethu kuya kukuthumela ikhonkco lokuhlawula, kwaye ungahlawula kwi-Intanethi.
Egqithileyo ibhokisi yenoodle
Okulandelayo: Ipheyile lephepha
China Ukwenziwa Lixabiso Custom Ilogo okwakhiwa Pape ...